३ वाणिज्य बैंकले मागे ठुलो संख्यामा कर्मचारी, अनुभव नभएकालाई पनि अवसर – Insurance Khabar
३ वाणिज्य बैंकले मागे ठुलो संख्यामा कर्मचारी, अनुभव नभएकालाई पनि अवसर
काठमाडौं । तीन वाणिज्य बैंकले ठुलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरेका छन् । कर्मचारी माग गर्ने वाणिज्य बैंकहरुमा नेपाल बंगलादेश बैंक, सनराइज बैंक र सिभिल बैंक हुन् । यी बैंकले विभिन्न पदमा कर्मचारी मागेका हुन् ।
यी बैंकहरुले अनुभव भएकाहरुलाई व्यवस्थापकीय तहदेखि तथा अनुभव नभएका एवम् बैंकमा करिअर बनाउन चाहनेहरुलाई प्रशिक्षार्थी पदसम्मका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको जनाइएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी मागेको छ । बैंकले उक्त पदका लागि केही संख्यामा कर्मचारीको माग गरिएको जनाएको छ । उमेर हद भने २८ वर्ष तोकिएको छ । एप्लाई गर्ने म्याद डिसेम्बर ५ सम्म रहेको समेत सूचनामा उल्लेख गरेकमो छ ।
त्यसैगरी सनराइज बैंकले ब्रान्च मेनेजर, रिलेसनसिप मेनेजर वा अपरेसन इन्चार्ज र एक्स्टेन्सन काउन्टर इन्चार्जका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेकाले डिसेम्बर ५ सम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सिभिल बैंकले मानव संशाधन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले २८ वर्ष पुरा भई ५० वर्ष (महिलाको हकमा ५५ वर्ष) ननाघेको, स्नातकोत्तर उतीर्ण गरी १० वर्षको कार्यानुभव भएको भएको कर्मचारी मागेको छ ।
ईच्छुक तथा योग्यता पुगेकाले डिसेम्बर ४ सम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । थप जानकारीको लागि
Sundhara. Kathmandu, P.O.Box -9799
Fax No. 4251036